Waxaan tijaabinay Apple Watch, oo ah smartwatch-ka ugu fiican xilligan | Wararka IPhone
Apple Watch ayaa hadda timid dukaamo ku yaal Spain iyo Mexico iyo dalal kale ka dib laba bilood markii ay asal ahaan ka soo bilaabatay Mareykanka iyo dalal kale. Apple mar labaad ayey sameysay inkasta oo xaqiiqda in dad badani xaqiijiyeen inay ka daahday suuqan cusub, Apple Watch wuxuu noqday aaladda casriga ah, saacadda uu qof walba doonayo inuu ku haysto curcurka. Actualidad iPad-ka horey ayaan ugu haysanay muddo dheer iyo waxaan ku falanqeynaa dhammaan astaamaheeda sawirro iyo muuqaal si aad u ogaato xitaa faahfaahinta ugu yar ee smartwatch-ka ugu fiican ee aad iibsan karto, ugu yaraan hadda.
1 Naqshadeynta qaabka Apple run ah
2 Raaxada suunka isboortiga
3 Goobaha hore
4 Ogeysiisyada la beddeli karo
5 Codsiyada aad u kala duwan laakiin aan macquul ahayn
6 Shaashad aad u xasaasi ah, dibedda aan macquul ahayn
7 Maalin ismaamul la'aan dhibaato la'aan
8 Smartwatch-ka ugu fiican inkasta oo la horumarin karo
9 Jiil labaad sug?
Naqshadeynta qaabka Apple run ah
Qaabka aan dib u eegista ku sameyneyno waa Applemm 42mm oo bir ah oo leh suunka isboortiga madow. Naqshadeedu ma niyad jabin, oo sida shey kasta oo Apple ah u fiirsashada faahfaahintu waa ugu badnaan. Wax walbaa waxay ku habboon yihiin si qumman, waa shey aad u adag oo dhammaadka dhalaalaya ee birta waa mid gaar ah. Taajka dijitaalka ah gabi ahaanba meesha kama saarna socodkiisuna waa mid aad u siman, oo aan gujin ama dhaqdhaqaaq ka bixin meeshiisa.
Awoodin inaad aragto saacadda kahor intaadan iibsan waxay keenaysaa shaki badan oo ku saabsan cabirka ugu habboon. Si kastaba ha noqotee waxaan qabaa Habka 42mm, kan ugu weyn, ayaa ugu habboon kan ugu badan. Kaliya dabaqyada leh curcurada aad u yar ama kuwa doorbida saacadaha yar waa inay doortaan qaabka 38mm. Markaad ka soo saarto sanduuqa, waxa ugu horreeya ee cajaa'ibka lihi waxay tahay in cabbirkiisu uusan u weyneyn sidaad moodeysay, iyo inuu ka sii yaraanayo markii aad curcurka gacanta saarto.
Dhumucdiisuna sidoo kale aan la buunbuunin. In kasta oo ay u muuqan karto sawirrada aan ku aragnay khadka tooska ah ama xitaa fikradaha qaarkood ee aan awoodnay inaan aqrinno, aragtidaydu waxay tahay si aad uhesho smartwatch waa khafiif. Xaqiiqdii, way ka khafiifsan tahay saacadda aan sida caadiga ah isticmaalo, sida aad ku arki karto sawirka, in kasta oo ay run tahay inay tahay moodel kiis gaar ahaan qaro weyn leh. Saacadda Apple Watch waa mid raaxo leh in la xidho, in kasta oo qaabka birtu ka culus tahay tan aluminium, haddana ma aha saacad aad ku aragto inaad gabi ahaanba xidhan tahay.
Raaxada suunka isboortiga
Sida intiin badan oo horeyba u ogtahay, Apple Watch oo leh suun isboorti Laba cabbir oo xadhig ah ayaa lagu soo daray sanduuqa si ay ula jaanqaadaan curcurka.. Ma haysto curcuro gaar ah oo waaweyn, iyo suunka dhex-dhexaadka ah ee sida caadiga u yimaadda ayaa si fiican iigu habboon godka qalinka. Saacaddu si fiican ayey u dhisan tahay, oo ma bannaana, oo si dhib lehna uma socoto, laakiin sinaba uma raaxaysato. Suunka ayaa leh taabasho aad u jilicsan mana jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan qanjaruufo yar yar oo ay suumanka qaarkood sababaan, gaar ahaan kuwa timaha leh.
Dabcan, markaan rabno inaan sameyno isboorti, waxaa ugu fiican inaan si fiican u hagaajino suunka si uu xitaa u sii xirnaado. Waxaan galiyay daloolkii ugu dambeeyay, wali ma ahan mid dhib badan oo dareemaha wadnaha ayaa sifiican ugu shaqeeya qaabkan. Ma awoodin inaan tijaabiyo xargaha kale si aan u arko dareenka ay keenaan markii aan xirnaa si aad u adag, laakiin dabcan midka isboortiga waa mid aad u fiican.
Ku xirnaanta Apple Watch-kaaga iPhone-ka waa mid aad u fudud. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka Apple Watch oo ay ku jiraan macruufka nooca 8.3 ee talaabooyin kooban waxaad saacaddaada u heleysaa inay si buuxda u shaqeyso Waxa ugu fudud ayaa ah inaad saacaddaada ku qabatid kamarad, laakiin sidoo kale waa lala xiriirin karaa gacanta iyada oo aan dhib badan la helin. Nidaamka dejinta hore waa dhakhso, inkasta oo haddii aad doorato inaad haysato dhammaan barnaamijyada iswaafajiya ee lagu rakibay saacaddaada markaa waxay qaadan doontaa in muddo ah in lagu wareejiyo Waxa ugu fiican ayaa ah in kastoo ay u baahan tahay xoogaa feejignaan iyo waqti ah, waxaad dooraneysaa kuwa aad runti rabto inaad adeegsato, hadhowna waxaad heli doontaa wakhti aad ku darto ama aad ka saarto codsiyada.
Dejinta saacadaha ayaa asal ahaan laga sameeyaa barnaamijka Apple Watch ee ku saabsan iPhone-kaaga, iyada oo xulashooyin aad u yar laga heli karo Apple Watch lafteeda. Si dirqi ah ayaad u habeyn kartaa jihada saacadda sida curcurka aad u xiran tahay, iftiinka shaashadda iyo cabirka qoraalka, mugga ogeysiisyada iyo xoogga gariirka, iyo furaha furaha. Ikhtiyaariyadaha habayntu waa, xilligan, ugu yar, wax aan shaki ku jirin Apple inay ku sii ballaadhin doonto noocyada mustaqbalka.
Ogeysiisyada la beddeli karo
Saacadda Apple waxay aad uga badan tahay saacadda aad ka hesho ogeysiisyada taleefankaaga iPhone-ka, laakiin shaki la’aan ogeysiisyada ayaa qeyb muhiim ah ka ah waxa saacaddu qaban karto, waxayna noqon karaan kuwo aad u dhib badan. Qaabeynta bilowga ah waxaa ka mid ah in dhammaan codsiyada ogeysiisyada u diraya iPhone ay sidoo kale u diraan saacadda, taasina waa wax aan u maleynayo in yar ay adkaysan karaan. Codsiyada fariimaha, shabakadaha bulshada, emaylka iyo ogeysiisyada ku saabsan guulahaaga maalinlaha ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa jirka, saacaddu ma joojinayso gariirka mar walba, sidaa darteed Waa muhiim in la ogaado sida loo kala shaandheeyo waxa aad rabto si aad u hesho curcurkaaga iyo wixii aan ahayn.
Nasiib wanaag Apple waxay kuu ogolaaneysaa inaad tan u habbeyso si ay u jiraan ogeysiisyo gaadha iPhone-ka laakiin aan saacadda gaarin. Mar alla markii aad u kala dhig dhigto sidaad jeceshahay, isticmaalka Apple Watch ayaa ku guuleysta wax badan, iyo runti maahan wax laga xumaado, adiga iyo dadka kale toona. Ogeysiisyadu waxay soo saaraan cod (oo aad damin karto) iyo gariir aad u xeel-dheer (oo waad kordhin kartaa haddii aad rabto), laakiin ma daaraan shaashadda. Kaliya haddii aad curcurkaaga u jeediso si aad u aragto ogeysiiska waxaa lagu muujin doonaa shaashadda, taas oo la mahadiyo sidaa darteed haddii aad ku sugan tahay kulan ama shineemada saacaddaadu si joogto ah uma daarna oo dansan.
Haku mashquulin qaabka ayaa halkan uga sii baahi badan sidii hore, oo haddii aad ku shaqeysid hal qalab wuxuu ku shaqeynayaa kan kale. Waxaad ku haysataa mid ka mid ah «Glances» si aad dhaqso ugala soo xiriiri karto Apple Watch ama xarunta xakamaynta iPhone-kaaga. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in ogeysiisyada ku soo gaadha saacaddaada aan lagu soo ogeysiin doonin iPhone-kaaga, sidaas awgeedna looga fogaanayo ogeysiisyada nuqullada ah. Ikhtiyaarka ah inaad ka saarto dhammaan ogeysiiskaaga Apple Watch adoo adeegsanaya Force Touch waa wax aad u faa'iido badan oo lagu seegay iPhone-ka.
Codsiyada aad u kala duwan laakiin aan macquul ahayn
Buugga macluumaadka ee la jaan qaada Apple Watch waa mid aad u ballaaran, in ka badan 3500 oo keliya laba bilood oo suuqa ku jira, laakiin taas macnaheedu maaha inay dhammaantood runtii waxtar leeyihiin ama si fiican loo qaabeeyey. Waxaa jira dad aad u tiro yar oo runtii ka faa’iideysta fursadaha saacadda oo si sax ah u shaqeeya. Qaarkood aad ayey uga gaabinayaan inay bilaabaan, saacaddu xitaa waxay damineysaa shaashadda iyadoon la furin. Ma aqaan ilaa xadka ay noqon karto khaladka watchOS ama soosaaraha arjiga, waxay u badan tahay isku dhafka labadaba, laakiin waxay umuuqataa in si dhaqso ah lagu xalin doono iyadoo suurtagal ay tahay in si toos ah loogu rakibo codsiyada saacadaha, waana wax waxay si toos ah saameyn ugu yeelan doontaa waxqabadkooda iyo xawaaraha ay ku socdaan.
Codsiyada wadaniga ah si aad ah ayey u shaqeeyaan, waxayna tusaale fiican u yihiin waxa saacaddu run ahaantii qaban karto. Ka jawaab wicitaanada, qor fariimaha adoo sheegaya, maareynta emaylkaaga, la soco dhaqdhaqaaqaaga jimicsiga, maaree jadwalka taariikhdaada ... waxaas oo dhan waxaa loo sameeyaa si fudud oo dhaqso leh saacadda, waxay noqon doontaa waqti yar kahor intaan barnaamijyada horumariya isku mid gaarin in Apple sameysay ay yihiin barnaamijyadeeda.
Shaashad aad u xasaasi ah, dibedda aan macquul ahayn
Shaashadu waxay leedahay qeexitaan aad u wanaagsan. Labada saacadood iyo sawirada labadaba waxaa lagu arkaa tayo aad u wanaagsan, tanina waa mid si gaar ah loo ogaan karo haddii aad isticmaaleyso dhagax dixeed. Midabada way wanaagsan yihiin, xasaasiyadda cadaadiskuna way sarreeysaa. Xitaa marka hore tani waa dhibaato, maxaa yeelay waxaad had iyo jeer sameysaa Force Touch, taas oo macnaheedu yahay waa inaad dhowr jeer riixdaa si aad u hesho waxaad rabto. In kabadan hal maalin waad laqabsatay waadna ogaatay inaad inaad riixdo badhan kaliya inaad taabato, adigoon riixin, iyo inaad markaad wax riixdo aad sameyso Force Touch oo aad furto liiska u dhigma.
Bar horumar ayaa ah muuqaalka banaanka. Xaaladaha caadiga ah marka la eego way fiicantahay, laakiin markay hesho iftiinka qorraxda toos waxbaa u yara adkaada. In kasta oo aad arki karto waxa ka muuqda shaashadda, aragtida markaa maahan waxa aan dhammaanteen jeclaan lahayn. Waa wax umuuqda inay uga xunyihiin qaabkan muraayadda safayr ka badan midka isboortiga ee Gorilla Glass, laakiin ma aanan awoodin inaan tijaabiyo tan dambe. Weli waxaan ku adkeysanayaa, waxa ku jira ayaa la arkaa oo kaliya waxaa jira dhibaatooyin la xiriira qorraxda tooska ah.
Haa, waa la seegay in nuurku iskiis u hagaajiyo. Saacaddu waxay leedahay dareemayaal iftiin dabiici ah, sidaas darteed lama fahmin in Apple uusan ku darin shaqadan. Ugu dambeyntiina, waxa inteenna ugu badan aan qabanno ayaa ah inaan hagaajino dhalaalka illaa ugu badnaan, laakiin taasi waxay qasab ku tahay inay saameyn ku yeelato isticmaalka batteriga.
Maalin ismaamul la'aan dhibaato la'aan
Waan ognahay in batterigu uusan noqon doonin barta adag ee Apple Watch, laakiin wixii Apple ku ballanqaaday soo bandhigidiisa ayaa la fuliyaa dhibaato la'aan. Isticmaalka dhexdhexaad-sare ah way fududahay in la gaaro dhamaadka maalinta iyadoo 40% batari wali la heli karo, iyo adeegsi aad u daran oo ay ku jiraan la socodka dhaqdhaqaaqa jirka muddo hal saac ah dhibaato la'aan waad qaban kartaa ilaa habeenka. Weli kuma guuleysan in aan kafeeyo baterigeyga intaanan seexan, waxaana jiray maalmo markaan si buuxda ugu isticmaalay.
Nasiib darro tan macnaheedu waxa weeye in habeen kasta waa inaad lacag ka qaaddaa, maxaa yeelay macno malahan haddii aad ku timaadid 40% ama 10%, ma sii socon doonto maalin kale. Inkasta oo xeedhoku aad u fiican yahay (marka laga reebo dhererka xarigga), waxaad tabaysaa taageero si aad u dhigatid habeenkii, waana wax laga xumaado in Apple aysan ka fikirin wax ka badan moodeelkeeda (dahab).
Smartwatch-ka ugu fiican inkasta oo la horumarin karo
Khatar ma ahan in la yiraahdo Apple Watch waa smartwatch-ka ugu fiican ee aad maanta iibsan karto, in kastoo aysan dhib ahayn in lagu gaaro fursadaha la heli karo hadda. Waxaa jira smartwatches leh ismaamul ka weyn, laakiin howlahoodu xitaa kuma dhow yihiin waxa ay bixiso Apple Watch (haa, waxaan ula jeedaa Dhagax dixeed). Xagga tayada qalabka, naqshadeynta, dhameystirka iyo waxqabadka, ma jiro cid la tartameysa hadda oo hadheyn karta Apple Watch, inkasta oo ay tahay shirkadda tufaaxa, tani macnaheedu waa in qiimaheedu sarreeyo. In yar oo smartwatches ah ayaa leh qiime ka sareeya kan Apple Watch, in kasta oo haddii aan xisaabta ku darsanno in dhammaan moodooyinkoodu ay si isku mid ah u wada shaqeeyaan, ikhtiyaar fiican ayaa noqon kara in la doorto qaabka ugu jaban
Heerka software-ka wali wax badan ayaa laga hagaajiyaa, badankoodna horumarintani waxay la imaan doonaan watchOS 2.0. Waxay seegtaa xulashooyinka qaabeynta sida aasaasiga ah sida codadka ogeysiiska, iyo inaad awood u yeelatid saacadaha inbadan. Laakiin waa inaan sidoo kale maskaxda ku haynaa taas waxaan wajaheynaa jiilka koowaad ee qalab gebi ahaanba cusub, Taasina waxay leedahay qiimo.
Jiil labaad sug?
Waxaa jira dad badan oo dhahaya waxaa fiican inaad sugto tusaalaha soo socda ee Apple Watch. Tiknoolajiyadda waa wax lagu dabaqi karo dhammaan badeecadaha la bilaabay: midka sanadkiiba wuu sii fiicnaan doonaa, lagana yaabee inuu xitaa ka jaban yahay. Sida iska cad, sidaan horay u idhi, noqoshada "korsato hore" waxay leedahay qiimo, laakiin waxay kaloo leedahay dareenkaas gaarka ah ee haysashada saacad gaar ah oo curcurkaaga ah oo ay dad kooban weli haystaan. Ma sugi kartaa inta Apple ay soo saareyso tusaalaha xiga? Xanta ayaa sheegeysa inay imaan karto sanadka 2016, laakiin taasi waa la arki doonaa. Waqtigan xaadirka ah waxaan ognahay haddii Apple Watch la cusbooneysiin doono sanad kasta ama labadii sanoba mar, taasna waa in badan oo la sugo.
Hagaajinta ayaa sidoo kale ku imaan doonta heerka barnaamijka software, shaki la'aan. Apple Watch wali wax badan buu is bixin karaa, iyo watchOS wax badan ayey hagaajin doontaa laga bilaabo bisha Oktoobar. Horumariyayaashu waxay sidoo kale wanaajin doonaan codsiyadooda, koronto cusubna waxay u muuqan doonaan Apple's smartwatch. Aniga oo ah milkiile Apple Watch, smartwatch lover, iyo techie, uma maleynayo inaan qof kula talin lahaa inuu sugo jiilka soo socda. Apple Watch waxay leedahay hadiyado qurux badan iyo mustaqbal aan caadi aheyn oo deg deg ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxaan tijaabinay Apple Watch, smartwatch-ka ugu fiican xilligan
gabi ahaanba ku raacsanahay wax walba, waa bakoorad qofkii bixiyana waxaan ku leenahay curcurkayaga ilmo wax badan u koraya
TaiG waxay cusbooneysiisaa jebinta ay kuhesho nooca 2.1.3 khaladaadka hagaajinta